ပိုက်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် [Genvers] အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအလုပ်
၎င်းသည် piping ၏သော့ချက်စာလုံးအားရှာဖွေသည့်အလုပ်၏အလုပ်ခန့်အပ်မှုသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။အလုပ်ဒေတာဘေ့စမှ"ပိုက်"အပါအဝင်အလုပ်စာရင်းများပြသခြင်း။
ပိုက်အပါအဝင် site ကိုအလုပ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ
အခြေအနေ setting ⇒ [ပိုက်လိုင်း]
Tsurumi ရပ်ကွက်၊ Yokohama City, Kanagawa စီရင်စု
အသက်အရွယ်မရွေးလူတို့မှလူငယ်များသည်လယ်ကွင်းတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ကြသည်။ သူငယ်ချင်းများစွာသည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။ ဥပမာလယ်ကွင်းမှအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။
●လူငယ်များနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများပြည့်နှက်နေသောအလုပ်ခွင်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အသက် ၂၀ ကျော်သူများတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ငါအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ 』…ဤသို့သောအတွေးအခေါ်မှလူ ၁၀ ဦး စီ၏အရောင်အသွေးနှင့်အရောင် ၁၀ လုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားသည်။ (^^) ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်အလွန်လှုံ့ဆော်ခံရပြီးတစ်ခုစီတွင်သူတို့၏ပန်းတိုင်များရှိပြီးစေတနာအလျောက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှအများအပြားချီးမွမ်း။ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းတစ်ဝက်ခန့်သည်ဤအလုပ်ကိုအတွေ့အကြုံမရှိဘဲစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်ပျော်စရာကောင်းသော၊ ဖော်ရွေပြီးအဆင်မပြေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။သင်ကအတွေ့အကြုံနည်းရင်တောင်နုပျိုပြီးလှုံ့ဆော်ခံရရင်တောင်အဆင်ပြေပါတယ်။ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်
Hitoken Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Mori Equipment Co. , Ltd.
[ရေပိုက်သမား / မြေကြီးလုပ်ငန်း] အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!အဆိုပါအဆောင်ကိုလည်းညှိနှိုင်းပါ! [Gyoda City, Saitama Prefecture]
[ရေပိုက်သမား / မြေကြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုတက္ကသိုလ်စုဆောင်းမှု / Gyoda City, Saitama Prefecture] ●ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုကြောင့် ၀ န်ထမ်းများကိုရှာဖွေနေသည်။အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။အတူတူကြီးပွားကြပါစို့အနာဂတ်အတွက်သင်၏လွတ်လပ်မှုကိုမျှော်လင့်ပါသည်။
●လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ထမ်းများ (ရေပိုက်သမား / မြေလုပ်ငန်း)
●လစဉ်လစာ / ၂၅၀,၀၀၀ မှ ၄၅၀,၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်မက (* နေ့စဉ်လစာ / ၁၀,၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်း) * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အညီငါတို့လစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
Gyoda City, Saitama စီရင်စု
● Saitama စီရင်စု Gyoda City အခြေစိုက်ဆင်ခြေဖုံးရှိနေရာတစ်ခုစီ (အဓိကအားဖြင့် Saitama စီရင်စု၏မြောက်ဘက်ပိုင်း) ။
Mori Equipment Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Sakuraba Kogyo Co. , Ltd.
ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း << ပိုက်လိုင်းလုပ်သား >> ★ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကြိုဆိုသည်။သင်၏မျက်လုံး၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဘာကြောင့်ထို site ကိုမတွေ့ကြုံရသနည်း of စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု << ပုံသေလစာစနစ် >> ★ 1R အဆောင်ရှိနိုင်သည်2မိသားစု XNUMXK ရနိုင်သည်♪ Genecon စီမံကိန်းများပေါများ / တည်ငြိမ်သောအလုပ်ပမာဏ★ဝင်ငွေ / တည်ငြိမ် / အနာဂတ် !!
◆လစဉ်လစာ [ပုံမှန်လစာစနစ်] (၁) ယန်း ၂၀၀,၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မက / အတွေ့အကြုံမရှိ (၂) ယန်း ၃၂၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို / အတွေ့အကြုံရှိသူ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ ★စမ်းသပ်ကာလသည် ၃ လဖြစ်သည်။ ★☆သင် ...
Yamato City, Kanagawa စီရင်စု
အဓိကအားဖြင့်ကာနာဂါဝါစီရင်စုနှင့်တိုကျိုမြို့များမှာ * မနက်မှာရုံးမှာစုဝေးပြီး site ကိုအတူတူသွားကြတယ်
Sakuraba Kogyo Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Oto Kogyo ကုမ္ပဏီလီမိတက်
★ အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ★စီးပွားရေးချဲ့ထွင်ခြင်း abund များပြားလှသောကန်ထရိုက်ကန်ထရိုက်စီမံကိန်းများရှိပြီးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။အိမ်ထောင်သည်များသည်လည်းလုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရှိကြသည်။ inex အတွေ့အကြုံနည်းသူများပင်လျှင်သင့်အားအစကတည်းကဂရုတစိုက်လမ်းညွှန်လိမ့်မည်
★ business ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ရေရှည်စီမံကိန်းများနှင့်တည်ငြိမ်သောလုံခြုံရေး☆ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်နေသောစွမ်းအားရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက်အထူး ဦး စားပေးကုသမှု★အတွေ့အကြုံမရှိသူများ၊ သင့်တွင်“ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ရိုးသားမှု” ရှိပါကကြင်နာမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြီးပွားလိမ့်မည်။ယုံကြည်စိတ်ချရသောကျွမ်းကျင်မှုများဆည်းပူးရန်အခွင့်အလမ်း!ကျေးဇူးပြု၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။
(၁) [ကုမ္ပဏီ] ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား - လက်များတပ်ခြင်း / အမှတ်အသားလုပ်ခြင်း (၂) [ကုမ္ပဏီ] လေအေးပေးစက်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (၃) [ကုမ္ပဏီ] စီမံခန့်ခွဲမှု / အရောင်း / အထွေထွေစီးပွားရေး (ခေါင်းဆောင် / လေအေးပေးစက်)
◆ကန်တို① Company [ကုမ္ပဏီ] ★သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အပြည့်အဝ★ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား - လက်တပ်ဆင်ခြင်း / အမှတ်အသားအလုပ်☆အတွေ့အကြုံမရှိသူ၊ ကြိုဆိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု※စမ်းသပ်ကာလရရှိနိုင်ပါသည်◇နေ့စဉ်လစာ ၉၀၀၀ မှ ၁၅ အထိ ...
တိုစီကာရပ်ကွက်၊ ယိုကိုဟားမားမြို့၊ ကန်နာဂါစီရင်စု
◆ကန်တို①①ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများ Kanagawa၊ တိုကျို၊ Chiba၊ Saitama ②လေအေးပေးစက်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု Kanagawa၊ တိုကျို, Osaka, Chiba, Saitama, Niigata, Takasaki (Gunma) ③ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပိုက်များ ...
Oto Kogyo ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု☆စီမံကိန်းများစွာအတွက်လမ်းဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း။ OK အတွေ့အကြုံမရှိသော OK single တစ် ဦး တည်းအိမ်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လွတ်လပ်စွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အလုပ်များ!ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် << တည်မြဲသော၊ ရေရှည်အလုပ်ရှိသည်။ ★လစဉ်ယန်း ၃၀၀,၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မကသောဝင်ငွေများဖြစ်နိုင်သည်။ ★၎င်းတို့၏အသက် ၂၀ နှင့် ၅၀ အတွင်းတက်ကြွစွာ!ဆောက်လုပ်ရေး၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစသည့်များပြားလှသောစီမံကိန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်ပြီး ၀ န်ထမ်းများထပ်မံရှာဖွေနေသည်။အလုပ် ၀ န်ထမ်းအနေဖြင့်အများပြည်သူသုံးလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လူနေအိမ်မြေယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။သင်သည်ခြစ်ရာမှလာသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏အတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝအသုံးချလိုသည်ဖြစ်စေလျှောက်ထားရန်လွတ်လပ်စွာခံစားရပါ။၀ န်ထမ်းအားလုံးကသင့်ကို back up လုပ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်။
လမ်းဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
◆အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ ◆အတွေ့အကြုံမရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ ၈၀၀၀ ယန်းစတင်☆အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း၊ စွမ်းရည်ကိုအခိုင်အမာအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ ☆သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အချိန်မရွေးကျွမ်းကျင်စွာ ...
Kanagawa ရပ်ကွက်၊ Yokohama City, Kanagawa စီရင်စု
တိုနာအနီးရှိ Kanagawa စီရင်စုအပေါ်ဗဟိုပြုသည်
Sokou Kensetsu Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ